I-coffee caffeine netiyi
Ingxenye ebalulekile yendawo yokusebenza yanamuhla ikhompyutha yomuntu siqu, umqulu wamafolda onamaphepha kanye nendebe yekhofi esanda kuphuzwa. Lapho ebonile ngokwanele ukukhangisa mayelana nalesi siphuzo, abaningi bacabanga ukuthi yindlela kuphela yokuzijabulisa, ukubandakanyeka emsebenzini, ukuxosha ukulala nokukhathala, noma nje ukuthatha ikhefu. Ngesikhathi esifanayo, ukulinganisa i-caffeine kuyanda nsuku zonke nokuningi, futhi ngenxa yalokho, umuntu angakwazi ukuzibiza ngokuphepha ngokuthi i-coffeeman yangempela. I-coffee caffeine kanye netiyi ngokulinganisa amancane kuqinisa imoto nokusebenza kwengqondo, kunciphisa ukukhathala nokulala, futhi ngenxa yalokho, kunika umuzwa we-vivacity, kuvulwa okuthiwa "umoya wesibili", kuba lula ngomuntu ukuthi asebenze.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi umbono okhona mayelana nekhofi uvame ukungahambi kahle, ngoba Ukusetshenziswa kwe-caffeine ngamanani amakhulu kungase kungabi nomphumela oyifunayo futhi kungalimaza umzimba, ukuguqula ukusebenza kwawo esiqondisweni esingathandeki kuwe. Ngokufanayo, kubangele ukukhathala nokuthinte kabi umsebenzi wesistimu yezinzwa eziphakathi, okwehlisa amangqamuzana omzimba. Ngaphansi kwethonya lekhofi ne-caffeine, umsebenzi wezinhliziyo ukwanda, ukucindezeleka kwegazi kuphakama, izitsha zesisu esiswini somzimba omncane, ukuphazamisa umsebenzi wesisu, ngakho ukusetshenziswa kwekhofi kudonsa isifiso sokudla. Ngokuvame kakhulu, umsebenzi wokwenyuka kwengqondo kanye nokukhathazeka kwe-CNS yimbangela yokungalali.
Ekhuluma ngekhofi nokubhema, ungakhohlwa ngemiphumela eyingozi yokwanda kwe-nicotine kanye nokusetshenziswa kwe-caffeine. I-Nicotine igcwalisa umzimba nge-toxin futhi iholele ekufakeni umoya we-oksijeni wezicubu. Ukusetshenziswa njalo kwekhofi kanye ne-nicotine kuholela ekushintsheni okungenakuguqulwa emzimbeni womuntu.
Kwabesifazane abathandekayo kuyophinde kube usizo ukwazi ukuthi nakuba i-caffeine iyisisusa esiwusizo sokushisa ama-calorie kanye nento esiza ngamafutha atshisayo, ikhofi ibuye ibe umsizi we-cellulite!
Akekho othi ikhofi yisitha. Amanani amancane we-caffeine asisiza ngempela emsebenzini wethu wansuku zonke. Futhi, noma yini ongayisho, lokhu kuyisikhathi esiphundu futhi esimnandi. Ikhofi ikhofi ngosuku alulimazi. Uma ikhofi ingumhlabathi, kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi abakhiqizi bekhofi esheshayo bathengisa umkhiqizo wabo, wonke umuntu uyaqonda ukuthi ungaphansi kokunambitheka kubhontshisi wekhofi. Ikhofi enesisindo iqukethe amanani amakhulu e-caffeine, ngakho imiphumela emibi ingaba yingozi kakhulu.
Kodwa indlela yokunciphisa ukusetshenziswa kwe-caffeine, uma kunzima ukuvuka ekuseni ngaphandle kwekhofi, futhi kungenakwenzeka ukuba ungene emsebenzini ngokushesha ngaphandle kwalesi siphuzo, kunzima futhi ukuqala umsebenzi emva kokudla ... Kufanelekile ukuthambisa ngokunciphisa inani lekhofi, ukuzama ukusebenzisa ubhontshisi wekhofi, ngoba kukhishwa enkomishini futhi ngaphandle kwe-Turk. Ungadli ikhofi, ubheka umqapha, ngoba umphumela ohlelweni lwezinzwa zomphakathi luyanda. Kodwa ngokubhema kanye nekhofi ngesikhathi esifanayo ukuphuza kufanele kukhohliwe.
Ungasusa kanjani amagesi?
Ukuhlonza nokukhethwa kwama-contact lens
Isifo sokushisa ngokomzwelo kwabasebenzi bezenhlalakahle
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo wedayimane
Jelly kusuka ugqumugqumu
Yini isehlukaniso esingaholela ekuphileni kokude isikhathi ndawonye?
Indlela yokwenza umgexo "Umona omhlophe"
Ikhekhe "I-Snow White"
UJacqueline Bouvier Kennedy-Onassis
Ungabangela kanjani ukubeletha ekhaya?
Ukufunda izincwadi zezingane ebusuku
Amaqhinga abesifazane ukujabulisa indoda
Amakhekhe we-Chocolate ngamantongomane